‘निर्वाचन उपयोग पनि संघर्षको एउटा रुप हो’ – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
‘निर्वाचन उपयोग पनि संघर्षको एउटा रुप हो’
श्याम केसी, ललितपुर १ नं. निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार
(लतितपुर गोदावरी नगर अन्तर्गत झरुवारासी–४ मा जन्मेका श्याम केसी १४–१५ वर्षको उमेर देखि नै कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय छन् । अर्थशास्त्रमा एमए गरेका श्याम कानुनका समेत विद्यार्थी हुन् । हाल उनी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ललितपुर जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मा लिएर काम गरिरहेका छन् । उनीसँग चुनावी विषयमा केन्द्रीत रहेर पत्रकार विष्णु आलेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी )
–हामीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्रमा संसदवादीहरुको घुसपैठ भयो । जसको कारणले गणतन्त्रनै कुरुप बन्न गएको छ । यो कुरुप गणतन्त्रलाई संसदवादीहरुको हातबाट खोसी जनताको गणतन्त्र स्थापित गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
कहिले प्राप्त हुन्छ त जनताको गणतन्त्र ?
–ठ्याक्कै यो मिति तिथिमा प्राप्त हुन्छ त भन्न सकिन्न तर जब जनताले अहिलेको कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट आम मजदुर किसान तथा श्रमजीवी वर्गको हित नहुने रहेछ भनेर बुझ्छन्, त्यस पश्चात जनगणतन्त्र प्राप्तिको लागि वातावरण बन्नेछ ।
के छन् त तपाईका चुनावी एजेण्डाहरु ?
–मेरो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण भेगका जनताले रुकुम रोल्पामा बस्ने जनताले जति पनि सुविधाको उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसर्थ, यस अवस्थाको अन्त्य गर्न भौतिक पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता दिने, सुचना, सञ्चार, यातायात, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा व्यापक सुधार गर्नेछु । भुकम्प पीडितका समस्या समाधानमा मेरो विशेष पहल रहने छ । ललितपुरको आम्दानीको स्रोत कृषि, पशुपालन लगायतबाट जीवन निर्वाह गरिरहेको किसानहरुलाई विशेष रुपमा हेर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको उच्चतम उपयोग गर्दै देश विकासमा अगाडि बढ्ने नीति निर्माणमा मेरो सहभागिता कतै टुट्ने छैन । यिनै मेरा एजेण्डाहरु हुन् ।
तपाईले चुनाव जित्ने आधारहरु चाहिं के के छन् त ?
–हामी क्रान्तिका सिपाही हौं, हामी संसदवादीहरुले जस्तो विकास र समृद्धिको अमूर्त नारा होइन कि वास्तविक रुपमा नै नेपालको मुहार फेर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियानमा लागेका छौं । त्यसमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता नै जितका आधार हुन् ।
तपाई संसदवादीको विरोध गर्नु हुन्छ । त्यही धारमा रहेर फेरि चुनाव चाँहि किन लड्नु भएको नि ?
–क्रान्तिकारी पार्टीले संघर्षका विभिन्न रुपहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले यो निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गरेका हौं । यो पनि संघर्षको एउटा रुप हो । संसदीय राजनीतिलाई क्रान्तिको पक्षमा उपयोग गर्न म चुनाव लड्दै छु ।
करोडौं खर्च गरेर अन्य दलहरु चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् के तपाईलाई चुनाव जित्न सहज छ त ?
–जनताको चेतनास्तर हिजोको भन्दा माथि उठिसकेको छ । अबका दिनमा पनि पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्छु भन्नु उनीहरुको मूर्खता हो । जनताले यस पटक परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने छन् । पैसा र पावर होइन निष्ठावान, सिद्धान्त र स्वाभिमानको पक्षमा आफ्ना मत जाहेर गर्ने छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । त्यही भएर हाम्रो पार्टीको विचारले जित्ने छ । त्यही जित हाम्रो जित हुनेछ ।